Global sysops/my - Meta
This page outlines the standards and guidelines related to the use of the user rights assigned to the global sysop user group. If you need help fromasysop orasteward on your project, please see Meta:တောင်းဆိုမှုများနှင့် အဆိုပြုချက်များ and Steward requests/Miscellaneous.
၆ Users with global sysop access
၁ autoconfirmed အိုင်ပီအခြေပြု ကန့်သတ်ချက်များကို အကျိုးမသက်ရောက်ပါ Normally part of the autoconfirmed user group or granted to all users
၂ spamblacklistlog View the spam blacklist log
၃ editsemiprotected Edit pages protected as "Allow only autoconfirmed users"
၄ move စာမျက်နှာများကို ရွှေ့ပြောင်းပါ
၅ movestable Move pages with stable versions
၆ upload ဖိုင်များတင်ရန်
၇ reupload ရှိပြီးသားဖိုင်များကို ထပ်ရေးရန်
၈ reupload-own သင်ကိုယ်တိုင် Upload တင်ထားခဲ့သည့် ရှိပြီးသားဖိုင်ကို ထပ်ရေးရန်
၉ skipcaptcha Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA
၁၀ flow-edit-post Edit Structured Discussions posts by other users
၁၁ flow-hide Hide Structured Discussions topics and posts
၁၂ abusefilter-log-detail View detailed abuse log entries Governed by local policies where they exist, otherwise part of the sysop user group
၁၃ abusefilter-modify အလွဲသုံးစားမှု စိစစ်စနစ်များကို ပြုပြင်ရန်
၁၄ templateeditor ကာကွယ်ထားသော တမ်းပလိတ်များကို တည်းဖြတ်ရန်
၁၅ rollback Quickly rollback the edits of the last user who editedaparticular page
၁၆ autoreviewrestore Auto-review on rollback
၁၇ movefile ဖိုင်များရွှေ့ရန်
၁၈ move-categorypages ကဏ္ဍစာမျက်နှာများကို ရွေ့ရန်
၁၉ move-rootuserpages Move root user pages
၂၀ move-subpages စာမျက်နှာများကို ယင်းတို့၏စာမျက်နှာအခွဲတို့နှင့်တကွ ရွှေ့ရန်
၂၁ autopatrol Have one's own edits automatically marked as patrolled
၂၂ patrol အခြားသောတည်းဖြတ်မှုများကို စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု မှတ်သားရန်
၂၃ ipblock-exempt Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks
၂၄ oathauth-enable Enable two-factor authentication
၂၅ blockemail အီးမေးပို့ခြင်းမှ အသုံးပြုသူကို တားဆီးရန် Normally part of the sysop user group
၂၆ block အခြားအသုံးပြုသူများ တည်းဖြတ်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ရန်
၂၇ delete စာမျက်နှာများကို ဖျက်ပါ
၂၈ nuke စာမျက်နှာများ အစုအပြုံလိုက် ဖျက်ရန်
၂၉ suppressredirect စာမျက်နှာများကို ရွှေ့သောအခါ မူရင်းစာမျက်နှာတို့မှ ပြန်ညွှန်းများ မဖန်တီးရန်
၃၀ browsearchive ဖျက်ပစ်လိုက်သော စာမျက်နှာများကို ရှာရန်
၃၁ undelete စာမျက်နှာတစ်ခုကို မဖျက်တော့ရန်
၃၂ deletedhistory View deleted history entries, without their associated text
၃၃ deletedtext View deleted text and changes between deleted revisions
၃၄ deleterevision Delete and undelete specific revisions of pages
၃၅ deletelogentry Delete and undelete specific log entries
၃၆ protect ကာကွယ်မှုအဆင့် ပြောင်းလဲရန်နှင့် သွယ်ဖြာ-ကာကွယ်ထားသည့် စာမျက်နှာများကို တည်းဖြတ်ရန်
၃၇ editprotected Edit pages protected as "Allow only administrators"
၃၈ editinterface Edit the user interface
၃၉ editsitejson Edit sitewide JSON
၄၀ edituserjson အခြားအသုံးပြုသူများ၏ JSON ဖိုင်ကို တည်းဖြတ်ရန်
၄၁ markbotedits နောက်ပြန်ပြင်သော တည်းဖြတ်မှုများကို ဘော့တည်းဖြတ်မှုအဖြစ် မှတ်သားရန်
၄၂ reupload-shared Override files on the shared media repository locally
၄၃ noratelimit Not be affected by rate limits
၄၄ import အခြားဝီကီများမှ စာမျက်နှာများကို ထည့်သွင်းရန်
၄၅ mergehistory စာမျက်နှာများ၏ရာဇဝင်များကို ပေါင်းရန်
၄၆ override-antispoof Override the spoofing checks
၄၇ tboverride Override the title or username blacklist
၄၈ titleblacklistlog View title blacklist log
၄၉ apihighlimits Use higher limits in API queries
၅၀ unwatchedpages စောင့်မကြည့်သော စာမျက်နှာများ၏ စာရင်းကို ကြည့်ရန်
၅၁ flow-delete Delete Structured Discussions topics and posts
၅၂ editcontentmodel စာမျက်နှာ၏ မာတိကာမော်ဒယ်ကို ပြင်ဆင်ရန်
၅၃ editsitecss Edit sitewide CSS Normally part of the Interface administrators user group
၅၅ editusercss အခြားအသုံးပြုသူများ၏ CSS ဖိုင်ကို တည်းဖြတ်ရန်
ဂလိုဘယ် သူကြီးများ: global permission · global groups (toolforge) · member list · group changelog
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_sysops/my&oldid=21780774"